Ninka guursanayaa wuxuu qirayaa inuu raadinayo qalab qaawan oo loogu talagalay carruurta - xnxx - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Ninka guursanayaa wuxuu qirayaa inuu raadinayo qalab qaawan oo loogu talagalay carruurta - xnxx
Ninka guursanayaa wuxuu qirayaa inuu raadinayo qalab qaawan oo loogu talagalay carruurta - xnxx
42, oo xubin ka ah Clare, ayaa qirtay Gardaí inuu galmo ahaan u soo jiito dhallaanka iyo socod-baradka da'doodu ka yar tahay saddex jir iyo ka baaraan degtay internetka loogu talagalay maqaayada qatarta ah ee carruurta.
Arbacadii, ninka ayaa qiray Gardaí in uu ahaa nepiophile ama qof jinsi ah soo jiidatay carruurta ka yar saddex sano jir.
Intii lagu guda jiray waraysigiisii ​​bishii Agoosto 2017, ninka ayaa qirtay in uu raadsaday waxyaabo fara badan. Gabdhaha iyo wiilasha oo da'doodu tahay 5 sano jir.
Markii la waydiiyay haddii uu raadinayay walxo muuqaal ah oo loogu talagalay dhallaanka, ninka ayaa ku jawaabay, "Taasi waa sax."
Ninka - oo maanta la socdey hooyadiis maxkamad - ayaa sidoo kale qirtay inuu abuuray sawirro fara badan oo cunugga ah isagoo sawir ka qaaday laba gabdhood oo uu la soo xiriiray Co Clare isla markaana la wadaago sawirrada mid ka mid ah caruurta oo leh lataliye kale oo online ah oo ku jira nidaamka wadaagista faylka.
Magaca adeegsigaan wuxuu ahaa: kinderlove82. In sarrifka internetka, faroxumeeyaha ah, "babytoddler123" isaga la weydiiyay hadii uu faraxumeeyey gabadh laba sano jir ah oo la kii uu soo xidhiidhay iyo ninka Clare ku jawaabay: "Waxaa laga yaabaa - laakiin isku day si aan hadda u helno rajo aad u badan "18 APRIL 2018.
Ninka wuxuu u sheegay Gardaí in xaaskiisu aysan aqoon u lahayn nepiophilia iyo hawlaha internetka. ] wuxuu sheegay in dib u eegis lagu sameeyay labada kombuyuutar ee bani-aadamka uu shaaca ka qaaday in uu 29 sawirro gaar ah u soo diray farriimaha 39 ee isticmaalayaasha kale.
Fariin ka timid akoonkiisa 82, wuxuu ku qoray '0-5 B ama G' iyo Det. Fitzgerald wuxuu tilmaamay in uu ilmuhu ku faraxsan yahay 0 da'da 5, wiil ama gabar.
Det. Fitzgerald ayaa sheegay in user uu ku soo laabtay 'kinderlove82' isagoo faallo ka bixinaya "Sawirada Caruurta".
Xaqiiqda. Fitzgerald ayaa sheegay in Gardaí uu xambaarsan yahay sheeko xoogleh oo ku saabsan bogga internetka ee qadka-ka-barashada sawir-gacmeedka.
Markii la weydiistay intii wareysiga uu la yeeshay Garda August August 2017, wuxuu waligiis heegan u ahaa jilitaanka galmada caruurta, ninka uu sheegay in uu sawiro laba sawiro ah u qaaday galmo  Det Det. Fitzgerald ayaa sheegay in kiisku "uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu khatarta badan" ee uu la kulmay sababtoo ah da'da da'da ee ka kooban iyo qaybinta qaybinta.
Xaqiiqda. Fitzgerald ayaa sheegay in afar sawir oo laga helay mid ka mid ah kombuyuutarrada ragga ay ahaayeen carruur ka yar hal sano jir iyo dabeecad galmo.
Xaaladda, ninka ayaa qirtay dambiga 4 September 2013 inuu ogaado si qarsoodi ah u qeybinta filimada carruurta ee qaybinta, daabacaadda iyo dhoofinta. sida waafaqsan 5 (1) ee Sharciga 1998 ee Ka-ganacsiga Caruurta iyo Filimada.
Nin ayaa sidoo kale qirtay in ay og hanti images 7 606 ee filimada iyo video files ilmaha 139 isku lid waqti ay ku Qodobka 6 (1) sharciga 1998 on ganacsiga carruurta iyo filimada.
Det. Fitzgerald ayaa sheegay in ninkaas uu u sheegay in uu galmo ahaan u weeraray seddex ilaa 14.
Xaqiiqda. Fitzgerald ayaa sheegay in ninkii - oo aan lahayn xukun ciqaab ah - isaga u sheegay inuusan ogeyn sida uu u helay waxyaabaha, laakiin wuxuu la yaabay inuu helay xiisaha.
Dacwad-ooge ayaa sheegay in ninkaas uu ogaa in wixii uu sameeyay ay gebi ahaanba qaldan yihiin
Baare Saajin Daragh O'Sullivan sheegay Gardai ay soo basaaseen ayay guriga ninka ee September 2013 socda warbixin siiyey ay qeyb ka baaritaan caalami ah oo ay sameeyeen FBI-da ee Maraykanka iyo [Criminal91945]. xafiiska halkan
Det Sgt. O'Sullivan wuxuu sheegay in dukumiintiyada la qabtay la siiyay oo keliya qeybta internetka ee dambiyada 2016 iyo in dib-u-dhiska ay sabab u tahay arrimo kheyraad oo la xidhiidha wakhtigaas. 19659002] Golaha Guurtida, Orcan Connolly BL ayaa sheegay in eedaysanaha loo magacaabi karo iyo in Garsooraha Gerald Keys uu sheegay in uu go'aansan doono inuu aqoonsado ninkaas taariikhda xukunka, laakiin ayaa amar ku bixiyay in aan loo aqoonsan ninka hadda.
Talada loogu talagalay eedeysanaha, Mark Nicholas SC. ayaa yiri: "Tani waa sheeko aad u xun, shaki kuma jiro. Waa wax aad u dhib badan. "
Mudane Nicholas ayaa xaqiijiyay in macmiilkiisa uu qirtay dembiga oo uu gacan ka geystay baaritaanka Garda.
Mudane Nicholas ayaa sheegay in macmiilkiisa uu lahaa taariikh shaqo oo wanaagsan oo aan lahayn xukuno hore. Wuxuu sheegay in macmiilkiisa "uu sameeyay dadaal badan oo lagu xakameynayo xaaladiisa".
Nicholas wuxuu sheegay in ninkan uusan ku sii jiri jirin hoowlaha Garda ee tan iyo 2013.
Mudane Nicholas wuxuu codsaday in Keys J. uu noqdo mid caqli gal ah oo qumman.
Xeerka Cadaaladda ayaa ninkii dib ugu soo celiyay damiinasho ilaa 20 May si uu u adeego xukunkiisa.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/married-man-admits-he-sought-out-pornographic-material-of-babies-1.3856060
Warbaahinta: Crtv Sports oo la bilaabi doono May 2019
Ma waxaad ka shakisan tahay inaad tagto safar baaskiil? Fiidyow yar yar ayaa ku dhameyn doona ku qancinta.